किन चुनाव हारे ट्रम्पले? – Deep Sanchar
गृहपृष्ठ ∕ ग्लोबल ∕ किन चुनाव हारे ट्रम्पले?
किन चुनाव हारे ट्रम्पले?
गुणराज लुईटेल कात्तिक २४, २०७७ गते २०:३७ मा प्रकाशित
अमेरिकालाई संसारै भरिबाट प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको लागि जननी भनेर चिनिने गरिन्छ । यो सिस्टम र पद्दतिले चलेको देश पनि हो । यस्तो ठाउंमा २०१६ मा राष्ट्रपति बन्न पुग्नु भएका यहॉका एक सम्पन्न ब्यापारी डोनाल्ड ट्रम्पले ४ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा २०२० को आम निर्वाचनमा हार्न पुग्नु भएको छ । यो हारलाई एक शर्मनाक हारको रुपमा पनि लिइएको छ किनकि अमेरिकामा पहिलो कार्यकालबाटै बिदा हुनुलाई राजनीतिक रुपमा लज्जास्पद मानिन्छ । पहिलो कार्यकालमै चुनाव हार्ने ट्रम्प अमेरिकाको चौथो राष्ट्रपति हुनपुगे । ट्रम्पले चुनाव हार्नुका असंख्य कारणहरु छन । केहीको यहां चर्चा गरौं ।
आप्रवासीलाई कडा नियम बनाउंदै देश निकाला गर्ने, नागरिक बन्नबाट बन्चित गर्ने मात्र होइन उनीहरुबाट देशलाई खतरा छ भनेर टाष्ट्रबादको खोक्रो ढोंग फुके ।नागरिक र सरकारको दूरी बढाए । यिनको पालामा धनी र गरीवको खाडल झनै बढ्यो । उनको नजरमा समर्थक सवै राष्ट्रबादी देखिए र प्रतिपक्षी सवैलाई गैर राष्ट्रबादीको बिल्ला भिराइदिए । गोरा बाहेक कुनै पनि छालालाई उनले अमेरिकन देखेनन् चाहे त्यो संसदमा जितेर पुगेको होस चाहे सर्बोच्च अदालतको न्यायधिश नै होस ।
अझ डाक्टर र स्वास्थ्य विशेषज्ञलाई त झारपात जति पनि मान्यता दिएनन्। अन्तत: ट्रम्पको कमजोरीको कारण चुनाव हुंदासम्म १ करोड जति अमेरिकनहरु संक्रमित भएका थिए भने २ लाख ४० हजारले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।
यति हॅुदा पनि उनले कोरोना ठूलो महामारी हो, यसबाट जोगिन मास्क लगाउनु र सामाजिक दूरी कायम गर्नु भनेर जनतालाई आह्वान गरेनन् ।यो सवै गर्नुको मुख्य कारण के थियो भने उनी धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सडकमा उतार्न चाहन्थे र केही भएको छैन जस्तो गरेर चुनाव जित्न चाहन्थे । अझ डाक्टर र स्वास्थ्य विशेषज्ञलाई त झारपात जति पनि मान्यता दिएनन्। अन्तत: ट्रम्पको कमजोरीको कारण चुनाव हुंदासम्म १ करोड जति अमेरिकनहरु संक्रमित भएका थिए भने २ लाख ४० हजारले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।
अझै पनि २०० भन्दा बढी बच्चाहरु अमेरिकी बन्दी गृहमा थुनिएका छन र उनीहरुका बाबु आमा जीवित छन कि मारिए कुनै पत्तो छैन । ट्रम्पलाई दक्षिणका आप्रवासीसॅग गरेको यो घृणित र अनमेल नीतिको गतिलो जवाफ चुनावले दियो । असंख्य स्पानिस ल्याटिन अमेरिकी समुदायले यस पटक उनलाई भोट हालेनन् ।
धेरैभन्दा धेरै नीतिहरुमा चुकेका पनि छन् जसले गर्दा अमेरिकाका विरोधी राष्ट्रहरू, विरोधी विचारहरू र अमेरिकाको कुभलो चाहनेहरूको फलिफाप भएको छ भने संसारको रंगमन्चमा अमेरिका स्वयं एक्लै बन्दै जानुपर्ने अवस्था आयो ।ट्रम्पले सामरिक राष्ट्रहरुको नेटवर्क नाटोबाट अमेरिकालाई बाहिर बनाए । अमेरिकाका सहयोद्धा देशहरुलाई एक्लै बनाए । विश्व वातावरणीय पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिए । विश्वका व्यापारिक सम्झौताहरुबाट बाहिरिए ।
संसारमा प्रजातन्त्रको विकास गराउने, फैल्याउने र त्यसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्ने कुरालाई भन्दा पनि ट्रम्पले आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा व्यापार फैलाउने उद्देश्यले गरेका विश्व भ्रमणहरु खासै उपलब्धिमूलक रहेनन् ।
रिपोर्ट अनुसार २०१६ सालमा आफू राष्ट्रपति बनेको बेला ट्रम्पले जम्मा ७५० डलर मात्र ट्याक्स तिरेका रहेछन । र कयौं वर्ष देखि उनले एक पैसा पनि ट्याक्स तिरेका रहेनछन् र एउटा करोडपति व्यापारी भएर सामान्य घण्टाको काम गर्ने कामदारले भन्दा पनि कम ट्याक्स तिरेका रहेनछन् ।
चुनाबको मुखैमा आएर भने न्युयोर्क टाइम्सले विगत वर्षदेखि ट्रम्पले कति ट्याक्स तिरेका रहेछन् भनेर वास्तविक सूचना उदाङ्गो बनाइदियो । रिपोर्ट अनुसार २०१६ सालमा आफू राष्ट्रपति बनेको बेला ट्रम्पले जम्मा ७५० डलर मात्र ट्याक्स तिरेका रहेछन । र कयौं वर्ष देखि उनले एक पैसा पनि ट्याक्स तिरेका रहेनछन् र एउटा करोडपति व्यापारी भएर सामान्य घण्टाको काम गर्ने कामदारले भन्दा पनि कम ट्याक्स तिरेका रहेनछन् । उनले कति आर्थिक चलाखी गरेका रहेछन् । यस चुनावको मौकामा जनताले छर्लङ्गै चिन्ने मौका पाए उनी कस्ता किसिमका नेता वा ब्यापारी हुन् र अब के गर्छन् भन्ने विषयमा । त्यसै अनुसार उनीहरुले आफ्नो मत निर्माण गर्ने अवसर पाए ।
स्वतन्त्र प्रेसलाई जहिलेपनि फेक न्यूज भनेर कमजोर बनाउने प्रयास गरे भने प्रतिपक्षको भूमिकालाई रचनात्मक रुपले लिएर प्रतिपक्षीलाई सम्मानपूर्वक साथमा लिएर हिड्न सकेनन् । यसको सट्टा प्रतिपक्षीहरुलाई धारेहात लगाएर तथानाम तल्लो स्तरका गालीहरु गर्ने काम मात्रै गरे । यी सबै हर्कतहरुले गर्दा अमेरिकाको प्रजातन्त्रमा नै ट्रम्पद्वारा धेरै खतरा छ भन्ने मूल्याङ्कन यहाँका विभिन्न राजनीतिक नेताहरुले साथै सञ्चार जगत र स्वतन्त्र मतदाताहरुले पनि गरे ।
कोरोनाको मेडिकल निदानलाई मानेनन् । महिलाहरुलाई आफ्नो शरीरको मालिक आफै हुन दिने तर्कमा सहमत भएनन । तेस्रो लिंगीहरुलाई सैनिक सेवाबाट निश्कासन गर्ने र समलिंगी बिबाहलाई मान्यता नदिने तर्फ कडा बने । जलवायु परिवर्तनलाई ठाडै अस्वीकार गरे र सोलार ईनर्जी, वैकल्पिक ईनर्जी र ईनर्जी इन्डिपेन्डेन्स भन्दा पनि कोल इनर्जी र फ्राकिंगकै पक्षमा लागे । यी सवै पुरातनवादी अडानले पनि उनलाई चुनावमा धेरै घाटा भयो । – जिएनएन